ဘင်္ဂလားနဲမြန်မာ Cyber war ဖြစ်နေပါသည် များများ share ကြပါ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Facebook » ဘင်္ဂလားနဲမြန်မာ Cyber war ဖြစ်နေပါသည် များများ share ကြပါ
ဘင်္ဂလားနဲမြန်မာ Cyber war ဖြစ်နေပါသည် များများ share ကြပါ
Posted by kalink on Jun 22, 2012 in Facebook, News | 30 comments
မြန်မာနိုင်ငံသား fb အသုံးပြုသူများသတိပေးကြေငြာချက် မိမိ fb စာမျက်နှာတွင် http://goo.gl/ အစရှိသည့်
link ဖြင့်စသည် စာတန်းများကို လုံးဝလုံးဝ မနိုပ်ကြရင်သတိပေးပါရစေ လုံးဝလုံးဝမနိုပ်ပါနဲ
အဲ့ဒါနှိပ်လိုက်မိရင် ဘာဖစ်မှာလဲဟင် ရှင်းပြပေးပါ့လား
အဲဒါမျိုးလင့်လေးတွေ့ရင်မနှိပ်ပါနဲ့လို့ပြောတာပါ… ဟက်ကာတွေက နှိပ်မိတဲ့သူရဲ့ကွန်ပြူတာကို ဒုက္ခပေးပါလိမ့်မယ်… ဗိုင်းရပ်လိုမျိုးပေါ့…ကိုယ့်ဆီက ဒယ်တာတွေယူသွားပီး ပေါက်ကရတွေလုပ်ပစ်မှာ… ဖော့ဘွတ်ဆိုတော့ ပိုဆိုးတာပေါ့… မတော်မရော် အင်ဖော်မေးရှင်းတွေလျှောက်တင်ရင် ..ရှုပ်ကုန်မှာပေါ့.. မြန်မာနိုင်ငံသား အင်တာနက်သုံးတဲ့သူတွေကိုဦးတည် တိုက်ခိုက်နေတာ….
ရှင်းပြပေးတာ ကျေးဇူးပါတော် အာဘွား
မသိလို့မေးထားတာကို လက်အညိမ်မနေနိုင်ရင် ပေးထားမယ် လာဂဲ့
ခုလို ပြောပြပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။ share လိုက်ပါ့မယ်။
တိုက်ခိုက်.. ထိုးနှက်မှုတွေက အညိုးညိုးပါဘဲလားကွယ်….
ဖျဲ နင်တို့လက်စွမ်းပြရမယ့်ပွဲ ချချ.
သူကြီးဂေဇက်လည်း Bangladesh Cyber Army ဆိုတဲ့ အဖွဲ့ တိုက်ခိုက်ကြောင်း သူကြီး ရေးထားပါတယ် ။ ဂျာနယ် မှာလည်း မြန်မာနိုင်ငံ က ဆိုဒ်တွေ ကို တိုက်ခိုက်နေပါတယ် လို့ သူတို့ facebook မှာ ရေးထားကြောင်းဖတ်လိုက်ရပါတယ် ။ ဟိုတယ် ဆိုဒ် ။ အစိုး၇ ၀န်ကြီးဌာန က ဆိုဒ် တွေကိုပါတိုက်ခိုက်ပါတယ်လို့ သိရပါသည်။
အိုဘယ့် ဘင်းဂလားတို့ ရယ်…
မြန်မာနိုင်ငံ ကိုမှ ညှိုးချက်ပြင်းရတယ်လို့ ..
ဖတ်လို့ မရရင် ဒုက္ခဖြစ်မှာဘဲ။
မြန်မာ အင်တာနက် ကော်နက်ရှင် လမ်းကြောင်း များ ကျဉ်းမြောင်း သေးကွေး ပါသောကြောင့် ၄င်း ကြီးမားသော ဗိုင်းရပ်များ ၀င်ရောက် တိုက်ခိုက်ရန် မစွမ်းသာပါ သဖြင့် လာရာလမ်းကြောင်း အတိုင်း ပြန်လှည့် သွားပါ သည်။
အမ်ပီတီ မှလည်း ပိုမို စိတ်ချစေရန် ဘမ်းဝှစ်ဒ် များ လည်း ပို၍ ချုံ့ ထားလိုက် ပါ သည် ဟု အတည် မပြု ရသေး သော သတင်း တခု ရရှိထားပါ သည်။
ပေါက် က ရ။
မှာသွားကြည့်၍ information ရယူနိုင်ပါသည်။
မုခစါအုပ်ခေါ် ဖေ့ဘုတ် တွင် မဲမဲမြင်ရာမနှိပ်ဖို့လိုပါသည်။
တွေရာ LIKE မလုပ်ဖို့ ACCEPTမလုပ်ဖို့ တွေကရာ DOWNLOAD မလုပ်ကြဖို့
ကိုကိုအိုဗာရဲ့လင့်ကိုဝင်လို့မရပါဘူး…ကျော်ခွဝင်ရင် ဒုက္ခပေးရင်ပေးနိုင်တယ်.. မ၀င်ကြပါနဲ့..
ဒို့လဲ ပြန်ဆော်ချင်တယ် . . အမငှီး ဘီလိုဆော်ရမလဲ မသိလို့ . .
အဟေးဟေး . . ဆော်ချင်သကွဲ့ . .
တောက် !! ငါ့နှယ်နှော် . .
Eleven သတင်းကတင်တဲ့link မှာ အဲဒီလို လိပ်စာတွေပါတယ် ၊ဖွင့်ရမလား မဖွင့်ရဘူးလား လုပ်ကြပါအုံး
ကျွန်မသိချင်စိတ်ပြင်းပြတာကလေ … မြန်မာနိုင်ငံက ၀က်ဖ်ဆိုက်တွေကို ဟက်မယ်ဆိုလျှင် … သူတို့ မြန်မာဖောင့် ဖတ်တတ်လို့လားဟင် … ။
မြန်မာဖောင့်ကြည့်စရာမလိုဘူးလိုထင်ပါတယ် etone ခင်ဗျား… အိုင်ပီ အက်စ်ဒရက်နဲ့ ပရိုဂန်းမင်းတဲ့တိုက်ခိုက်သွားတာလို့ထင်ပါတာဘဲ…ဟက်ကာသမားတွေကတော့ ကဏန်းတွေနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်…အပေါ်က ကိုကိုအိုဗာရဲ့ သွားကြည့်ရွေ့အင်ဖော်မေးရှင်းရယူနိုင်ပါသည်ဆိုတဲ့ လင့်ကို ဖွင့်ကြည့်ရင် ဒါမျိုးတွေပေါ်တယ်…..http://172.20.20.26/ ပြီးတော့ access denied တဲ့…
မင်းရဲ့ကော်မန့် ၁၇ ခုပဲ ရှိပုံထောက်ရင်
ဘုမသိဘမသိ နဲ့ကွာ အင်တာနက်ကို…………..
MPT ,MC WILL, SKYNET , REDLINK …စသဖြင့်အများကြီး
access denied ဆိုတာ အားလုံးမတူကြဘူး၊
ဥပမာ MPT နဲ့ တချို့ဆိုဒ်တွေ ဖွင့်လို့ရပေမယ်..
ဒီရွာထဲမှာ တကယ်ကို တတ်သိနာလည်တဲ့
ငါဟာ မြန်မာလူမျိုးစစ်စစ် တယောက်
အမျိုး ဘာသာ သာသနာ ကို
မိမိ အသက်ကို ပဓါန မထားပဲ
ဗုဒ္ဓဘုရားရှင် သိတယ်ကွ ၊
မင်းဘာလဲ ငါဘာလဲ ဘယ်သူလဲဆိုတာ
ရွာထဲက သူတွေဆုံးဖြတ် သိနိုင်တဲ့သူတွေ
လေ့လာလိုက်ပါအုံး ငါက အပြုသဘောနဲ့ပြောတာပါ ။
ဟုတ့်ကဲ့ တကယ်တိုတဲ့ တိုအိုဗာ စိတ်မဆိုးပါနဲ့နော်..အနော် ဆရာကြီးလဲမဟုတ်ပါဘူး.. ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာလဲ ရွာထဲကလူတွေ မဆုံးဖြတ်ပါဘူး… အဲ့တိုနေတဲ့ စိတ်လေးကို..ဆိုင်ဗာစစ်ပွဲမှာ အသုံးချရင်ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်.. တလွဲဆံပင်ကောင်းဖစ်နေအုံးမယ်..နော်.. ဘာဖစ်ဖစ် ၀ှက်ဖဲတခုတော့ရှိတယ်ရွာသားတို့ရေ..သတိ သတိ…^_^
ပြန်ချမယ်ဟေ့ အနော်က လောင်ချာဒေါင်းလော့လုပ်နေပြီ ပြီးတာနဲ့တွယ်မယ်
သူတို့ virus က နာ့ virus လောက်ပြင်းလားမသိဘူး … ပြိုင်စမ်းအုံးမှ
DDos Hacker ကိုcaptainamerica ဘယ်ရောက်နေပါလိမ့်။
ပြန်ဆော်ရမယ့်တာဝန့် မှည အပြည့်ရှိတယ်ဗျ။
င်္ူFlame ခေါ် မီးတောက်ဆိုတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ကတော့
သိပါပု. ကိုကိုအိုဗာ ပေါက်ကွဲနေလေ၏
တိုတိုအိုဗာပေးတဲ့လင့်လေးကို http://www.blinkhackergroup.org/…ကို ဒီတိုင်းဝင်မရလို့ကျော်ခွကြည့်ပါတယ်… ၀င်လို့ရပါတယ်.. မြန်မာကို ဟက်ဒ်ထားတဲ့ ဆိုဒ်တွေနဲ့ မြန်မာက ဘင်းဂလားဆိုဒါတွေကို ဟဒ်ထားတာတွေကို လစ်လုပ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်… ဒီလင့်ကနေ ကျော်ခွထားပါတယ်……http://mogoktunnel.com/browse.php?u=T1I03BjDxKoiH700uKJN%2BftAqCxsm6trbnh1zg%3D%3D&b=29&f=norefer
ဆော်နေတာ လနဲ.တောင်ချီပီးကြာနေရောပေါ့ ဒီအတိုင်းမတိုက်နဲ. နားကားသွားမယ် ရော့ ဒါလေး
ခုတစ်လော screen saver ဆိုပြီး မသိတဲ့သူတွေဆီက မေးလ်တွေ rar နဲ့ပို့နေတာတော့ သတိပြုမိတယ်။